Ergo စျေး - အွန်လိုင်း EFYT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Ergo (EFYT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Ergo (EFYT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Ergo ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $201 264.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Ergo တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Ergo များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ErgoEFYT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.25ErgoEFYT သို့ ယူရိုEUR€0.213ErgoEFYT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.192ErgoEFYT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.23ErgoEFYT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr2.26ErgoEFYT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.59ErgoEFYT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč5.58ErgoEFYT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.94ErgoEFYT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.333ErgoEFYT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.351ErgoEFYT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$5.61ErgoEFYT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.94ErgoEFYT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.34ErgoEFYT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹18.67ErgoEFYT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.42.32ErgoEFYT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.343ErgoEFYT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.382ErgoEFYT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿7.78ErgoEFYT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.74ErgoEFYT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥26.67ErgoEFYT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩296.4ErgoEFYT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦97.01ErgoEFYT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽18.31ErgoEFYT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴6.93
ErgoEFYT သို့ BitcoinBTC0.00002 ErgoEFYT သို့ EthereumETH0.000668 ErgoEFYT သို့ LitecoinLTC0.00469 ErgoEFYT သို့ DigitalCashDASH0.00292 ErgoEFYT သို့ MoneroXMR0.00291 ErgoEFYT သို့ NxtNXT20.33 ErgoEFYT သို့ Ethereum ClassicETC0.0375 ErgoEFYT သို့ DogecoinDOGE74.1 ErgoEFYT သို့ ZCashZEC0.00322 ErgoEFYT သို့ BitsharesBTS9.76 ErgoEFYT သို့ DigiByteDGB8.31 ErgoEFYT သို့ RippleXRP0.898 ErgoEFYT သို့ BitcoinDarkBTCD0.00882 ErgoEFYT သို့ PeerCoinPPC0.843 ErgoEFYT သို့ CraigsCoinCRAIG116.59 ErgoEFYT သို့ BitstakeXBS10.91 ErgoEFYT သို့ PayCoinXPY4.47 ErgoEFYT သို့ ProsperCoinPRC32.11 ErgoEFYT သို့ YbCoinYBC0.000138 ErgoEFYT သို့ DarkKushDANK82.04 ErgoEFYT သို့ GiveCoinGIVE553.83 ErgoEFYT သို့ KoboCoinKOBO58.29 ErgoEFYT သို့ DarkTokenDT0.23 ErgoEFYT သို့ CETUS CoinCETI738.44
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 03:35:02 +0000.